हाम्राे पिपलबाेट » ११ महीनामा थप साढे ४३ हजार महिलाले पाए सहुलियत कर्जा ११ महीनामा थप साढे ४३ हजार महिलाले पाए सहुलियत कर्जा – हाम्राे पिपलबाेट
ब्याज अनुदानको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी महिला उद्यमीमा प्रवाह भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को ११ महीनामा महिला उद्यमशीलता कर्जा लिने महिलाको संख्या ४३ हजार ८ सय ३१ थपिएको छ ।
महिला उद्यमशीलतापछि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय शीर्षकमा कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको संख्या बढी देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार जेठसम्म कुल ४४ हजार ७ जनाले यमे कर्जा लिएका छन् । गत आवको ११ महीनामा मात्रै यस्तो ग्राहक १९ हजार २ सय ४४ जना थपिएका छन् । यस शीर्षकमा रू. १ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख बराबरको कर्जा बक्यौता रहेको छ ।
यसमा प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीले कर्जा लिन पाउने भए पनि बैंकरहरूले नपत्याएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ । बैंकरहरूले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीले कर्जा दिँदा जोखिम हुनसक्ने बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाखसम्मको कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । तर, यस्तो ऋणमा उत्कृष्ट प्रोजेक्ट योजना र विश्वास नभएसम्म पत्याउन गाह्रो हुने संघका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’ शीर्षकमा ७ सय ९१ जनाले कर्जा उपयोग गरेका छन् । उक्त संख्याका ऋणीको रू. ५७ करोड ८२ लाखको ऋण बक्यौता रहेको छ । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रू. ७ लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रू. १० लाखसम्म लिन पाइने व्यवस्था छ ।
दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा ८ सय ५७ जनाले उपयोग गरेका छन् । उनीहरूको रू ५२ करोड २ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसैगरी, करीब ८८ जनाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाको लाभ लिएका छन् । हालसम्म २ सय ३२ जनाले भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा लिएका छन् । उनीहरूको रू. ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ वक्यौता रहेको छ । यसबाहेक, २ सय १८ जना कपडा उद्योगीले समेत सहुलियत कर्जा उपयोग गरेका छन् । यस्तो कर्जाको बक्यौता रू. २ अर्ब २३ करोड ४३ लाख रहेको छ ।
सबै शीर्षकमा गरेर ११ महीनामा ९६ हजार ८ सय ५२ जना ऋणीले सहुलियत कर्जा उपयोग गरेकाले प्रभावकारी बन्दै गएको केन्द्रीय बैंकका सह प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल बताउँछन् । उक्त अवधिमा उक्त ऋणीको बक्यौता रू. १ खर्ब ५० अर्ब ९६ करोड ३७ लाख बराबरको रहेको छ ।